အေးငြိမ့်မြိုင် – Pann Satt Lann Books
ထိုသူမှတပါး အခြားမရှိပေ …..။
၀လုံးလေးဟာ မိသားစု စီးပွားပျက်သွားချိန် ရရာအလုပ် လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဟိုတယ်လောကထဲကို အောက်ခြေကနေ ၀င်ရောက်ခဲ့ပါတယ် ..
ဒီကတစ်ဆင့် သူဖြစ်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့ ဘယ်အရာတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ချဉ်းကပ်ခဲ့ရသလဲ ? နောက်ဆုံး သူ့ရည်မှန်းချက်တွေက တကယ်ဖြစ်လာမှာလား ? လက်လျော့လိုက်ရမှာလား ?
ဘ၀မှာ မှားယွင်းတဲ့အချစ် ၊ မှားယွင်းတဲ့ လူတွေနဲ့ ကြုံရတဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေစိတ်ထားပြီး ကျောခိုင်းခဲ့ရသလဲ ? ကြုံလာရတဲ့ လောကကြီးက ပေးလာတဲ့ ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းတွေကို သူဘယ်လို ခံယူချက်နဲ့ လက်ခံခဲ့ရသလဲ ? ဆိုတာကို ဇာတ်ဆောင်ကောင်မလေးနဲ့အတူ စီးမျောပေးကြပါလို့ …..
( စာရေးသူ၏ ရင်တွင်းစကားမှ )
ပန်းဆက်လမ်းစာပေ၊ 2021 အောက်တိုဘာလ (ပ-ကြိမ်)
အေးငြိမ့်မြိုင် အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု3ရှိပါသည်။
Sabe – November 15, 2021
အရမ်းဖတ်ကောင်းတဲ့ ရသစာအုပ်လေးပါ။ ဆရာမ မယ်စုရဲ့စာအုပ်ကိုအခုမှပထမဆုံးဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်စာအုပ်စာပေဖတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလဲခံစားမိတယ်။ ကိုယ်မသိသေးတဲ့ မြန်မာထီးနန်းရာဇ၀င်ကိုလည်းလေ့လာမိတယ်။ နောက် ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်ခွင့်မရှိတဲ့လောကကြီးမှာဆိုတော့ ရှိတာလေးကိုရောင့်ရဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ရယ်၊ တစ်လှမ်းချင်းလှမ်းရင်းနဲ့ အနာဂတ်အိမ်မက်လေးကို အကောင်အထည်ဖော်ထားတာတွေကို ဖတ်ရင်းအားကျမိတယ်။ နောက် ကိုယ့်ဘေးနားမှာ ရင်ဖွင့်ပြောပြနိုင်မယ့် သူငယ်ချင်းလိုမျိုး၊ချစ်ရသူလိုမျိုးရှိရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးခံစားမိတယ်။
🌸 လူငယ်တွေမှာ ကိုယ်ပိုင် အိပ်မက်စိတ်ကူးလေးတွေ ရှိကြတယ်။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ဝါသနာကို စိတ်ကူးပုံဖော်ဖို့ ကြိုးစားကြရာ တစ်ချို့တွက် ရှောရှောရှူရှူရှိပေမယ့် တစ်ချို့တွက် ဝါသနာဟာ ဝါသနာမှာသာ ရပ်တန့်နေရတဲ့ အကြောင်းပြချက် အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ ခုဒီစာညွှန်းဖတ်နေသူကရော လက်ရှိကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်နဲ့ ကိုယ်ရဲ့ ဝါသနာက ထပ်တူကျပါရဲ့လား? ❝အေးငြိမ့်မြိုင်❞ ဆိုတဲ့ ဒီဝတ္ထုလေးကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားရာဝါသနာကို အရင်းခံပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေး တစ်ယောက်အကြောင်းကို ရေးဖွဲ့ထားတာပဲဖြစ်တယ်။
🌸 တစ်ရွာလုံးက ❝ဝလုံးမ❞ လို့ ခေါ်တဲ့ ❝အေးငြိမ့်မြိုင်❞ဟာ စွန့်စားမှုကို စိတ်အားထက်ပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ Tourist guide ဖြစ်ချင်သူ။ ဒါမဲ့ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုစပြီး ဒီခရီးသွားလုပ်ငန်းလောကထဲ ဝင်ရမယ် သူမ မသိပေ။ အထက်တန်းအောင်တော့ တက္ကသိုလ်ပညာရေးကို အဝေးသင်တက်ပြီး ရပ်မိရပ်ဖတို့ တိုက်တွန်းချက်အရ ရွာကျောင်းလေးမှာ ဆရာမ ဝင်လုပ်ရင်း သူမရဲ့ အိမ်မက်ကို ပုံဖော်ဖို့ အစပျိုးခဲ့တယ်။ အချိန်တစ်ခုမှာ ကံအကြောင်းမလှတော့ အိမ်စီးပွါးရေး နဲ့ မိသားစုပြဿနာဟာ မျက်နှာသာမပေးတဲ့အဆုံး အစ်ကိုကြီး အလုပ်လုပ်ရာ နေပြည်တော်ရှိ ဟော်တယ် တစ်ခုရဲ့ စိုက်ပျိုးရေးဌာန မှာ ခြေစုံပစ်ဝင်ခဲ့တော့တယ်။
ဒီလောကထဲ သူမတွက် သင်ယူစရာတွေများခဲ့သလို သူမဘက်ကလဲ အရှုံးမပေး ပဲ ရည်မှန်းချက်လမ်း မလွှဲအောင် ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုရုန်းကန်ခက်ခဲတဲ့ချိန် ❝ဝလုံးမ❞ ဘေးနားရောက်လာသူကတော့ ❝တိုးဝေယံစိုး❞ ပါပဲ။ ခက်ခဲသည်ဖြစ်စေ၊ ပျော်ရွှင်နေချိန်ဖြစ်စေ၊ ❝ငတိုး❞ဟာ ❝ဝလုံးမ❞ အပေါ် ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုထဲနဲ့ အဖက်ဖက်က တတ်နိုင်သလောက် ဖြည့်ဆည်းကူညီရှာပါတယ်။ အဆုံးစွန် ❝ဝလုံးမ❞ က သူ့အပေါ် စိတ်မဝင်စားသည့်တိုင် ဘယ်တော့မှ လက်မလွှတ်ခဲ့ပဲ တစ်မြိုင် ထဲ ❝မြိုင်❞ နေတဲ့ အဖော်ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အချစ်ကံမကောင်းသူလို့ ခံယူထားတဲ့ ❝ဝလုံးမ❞တွက် ❝အချစ်❞ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်စစ်စစ်ကို ခံစားခွင့်ရခဲ့တာပါပဲ။
ဆိုတော့ အချစ်ဇာတ်အိမ် နဲ့ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ခရီးကြား ဘယ်လို ထိန်းညှိပြီး စိတ်ကူးပုံဖော်သလဲ၊ ❝ဝလုံးမ❞ ရဲ့ ဘဝ အကွေ့အပြောင်းလေးတွေ ဟာ လှပခဲ့မလား၊ ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်ဝခဲ့သလား၊ ဝါသနာအဖြစ်သာ ရပ်တန့်သွားခဲ့သလား ဆိုတာတွေတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖတ်ကြည့်ခံစားစေချင်ပါတယ်။
🌸 တခါတလေ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ အရာ ဖြစ်မလာပေမယ့် လုံးဝ လက်လွှတ်လိုက်ရတာမျိုး မဟုတ်ပဲ ထိုအရာကို ပံ့ပိုးနေဖို့ အခွင့်တွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကို မြင်တတ်ဖို့နဲ့ စိတ်ပြင်ဆင်ပြီး ဆက်လက်ကြိုးစားနေဖို့ဟာ အဓိကကျကြောင်း နဲ့ ဖြစ်လာတဲ့ခါ ထိုအရာကို မြတ်နိုးတတ်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ဒီဝတ္ထုလေး ဖတ်တဲ့ခါ ခံစားမိစေမယ်လို့ ယုံကြည်ရင်း……
ဝတ္ထုအစပိုင်းတွေ ကျနော့်တွက် နည်းနည်း ကလေးဆန်ပေမယ့် ဇာတ်အိမ်တွေကတော့ အချိတ်အဆက်မိတာရယ် နောက်ပိုင်း အလည့်အပြောင်းလေးတွေရယ်က စာဖတ်သူကို ဆုံးအောင် ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်ဗျ။
“မယ်စု မယ်စု “
မျက်နှာဖုံးပန်းချီက ရှေးက ဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့မိန်းမလှလေးရဲ့နောက်မှာ မယ်နုအုတ်ကျောင်းနဲ့မြင်းလှည်းလေး။
အဲ့တော့ စိတ်ဝင်စားသွားတယ် အင်း၀မြို့ဟောင်းက ရာဇဝင်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလားပေါ့။
မယ်နုအကြောင်းကို အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ဖတ်ဘူး။
အင်းဝက မယ်နုအုတ်ကျောင်းကို အကြိမ်ကြိမ်အခါခါရောက်ဘူး။
အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ဘူး။
အင်းဝက ဒီအုတ်ကျောင်းကို ရောက်တိုင်း စိတ်ထဲမှာခံစားမှုတစ်ခု က အမြဲလိုလိုရှိနေတတ်တာ။
တပ်ကုန်းမြို့နယ်ထဲက ဇရပ်ကြီးကုန်း ကျေးရွာမှာနေတဲ့ “ဝလုံး “ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက ဇာတ်လိုက်ပေါ့။
သူက နေပြည်တော်က ဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့ ပန်းအလှပြင်အဖွဲ့ထဲမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ ကောင်မလေးပေါ့။
စစခြင်းဘဲ မြွေပွေးကိုခေါင်းကိုင်တဲ့ အခန်းက စလိုက်တာ ဖတ်ရတဲ့လူမှာရင်တမမ။
အဲ့ဒီဟိုတယ်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ အစ်ကိုအကြီးဆုံး ကိုကြီးအေးဆိုင် ၊ရွာက အစ်ကို ကိုကြီးအေးပိုင်တို့ရဲ့ ညီမလေး အေးငြိမ့်မြိုင်(ခ) ဝလုံး အကြောင်းကို စုံနဖာစီနေအောင်ရေးထားလိုက်တာ အကွက်ကိုစေ့နေတာပါဘဲ။
လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ ဟိုတယ်အကြောင်းလဲပါတယ်။ ရွာမှာသူနဲ့ ပြိုင်ဘက် သူဇာဝင့်ဆိုတာနဲ့သူ ချိတ်ကြတာတွေလဲပါတယ်။
ရွာက အကြောင်းတွေထဲမှာ ရွှေကွမ်းတောင်ကိုင်၊ ငွေကွမ်းတောင်ကိုင်ရွေးတာလဲပါတယ်။
အိမ်က စီးပွားရေးလုပ်ဘို့အတွက် ဝယ်ထားတဲ့ သုံးဘီးကို ခြေဆော့လက်ဆော့လုပ်မိလို့ ပြဿနာတက်တာတွေလဲပါတယ်။
ရွာမှာလာပြီးကျောင်းဆရာလုပ်တဲ့ ဆရာလေးရှင်းသန့် နဲ့ “သံယောဇဉ်ငြိတွယ်ခဲ့ပြီကွယ်” ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေလဲပါတယ်။
ဟိုတယ်မှာအတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေထဲက သူ့ကိုအမြဲအနွံအတာခံတဲ့ တိုး ဆိုတဲ့ကောင်လေးရဲ့အကြောင်းတွေလဲပါတယ်။
ဇာတ်ကောင်တွေအများကြီး အဖြစ်အပျက်အများကြီး ကို မပျင်းရလေအောင် အရေးအသား ခပ်သွက်သွက်နဲ့ ခပ်ညှက်ညှက်ကလေးဆွဲခေါ်သွာလိုက်တာ စာမျက်နှာ၈၀လောက်ထိကို ခဏလေးနဲ့ရောက်သွားပါတယ်။
ဝလုံး အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ စာပွဲထိုးအလုပ်အတွက်လူလိုအပ်တဲ့အခါ ဌာနအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေထဲကနေပြီးတော့ဦးစားပေးခန့်မယ်ဆိုပြီး စာထွက်လာတာနဲ့ ဝင်ပြီးလျှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ အင်တာဗျူးအောင်သွားတော့ နေရာအသစ်တစ်ခုကိုရောက်သွားပါတယ်။
နေရာအသစ်မှာ ချင်းကလေး အင်းဗွီးတို့ မြင့်ဆွေ ဆိုပြီး ဇာတ်ကောင်အသစ်တွေတိုးလာပြန်ပါတယ်။ အဲ့ကနေတက္ကသိုလ် အနီးကပ်သင်တန်းသွားတက်တဲ့အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေဖြစ်တဲ့ ဂျူစ် ၊ရွှန်း ၊ခင် တိုနဲ့ အလည်အပါတ်သွားတဲ့အချိန်မှာမှ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးမှာပါတဲ့ မယ်နုအုတ်ကျောင်းကို ရောက်သွားပါတော့တယ်။
အဲ့ဒီမယ်နုအုတ်ကျောင်းအရောက်မှာ ဆရာဥက္ကာဝင်းဆိုတဲ့ တိုးရစ်ဂိုက်လုပ်နေတဲ့ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက် ထပ်ရောက်လာချိန်မှာမှ နန်းမတော်မယ်နုရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေကို စုံစိနေအောင်ရေးပြပါလေရော။
ဆရာဥက္ကာဝင်းနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပြီးနောက်ပိုင်းဇာတ်လမ်းတွေမှာ စိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်လာ၊အလုပ်ထဲမှာ မတရားဂျောက်တွန်းခံရလို့ စိတ်တွေပျက် ဆိုတဲ့ ဒုက္ခတွေအပြီးမှာတော့ ဟိုတယ်မှာ လာတည်းပြီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင် “မစ်ချီ “ဆိုတဲ့ဂျပန်မကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဝလုံး ဘ၀ လေးက နတ်ရေကန်ထဲပစ်ချလိုက်သလို ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့ ဘဝကြီးက မြင့်တက်သွားပါတော့တယ်။
ဇာတ်အဆုံးမှာ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်စွာဘဲ အပျော်လေးနဲ့အဆုံးသတ်ထားပါတယ်။ဖတ်တဲ့သူရဲ့ စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်လောက်အောင်စာအရေးအသားကောင်းလှပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဇာတ်တစ်ခုလုံးမှာ စာရေးသူက သူဖြစ်ချင်တာတွေကို ဇွတ်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးပြီးရေးထားတယ်လို့ ခံစားရတာကတော့ အမှန်ပါဘဲ.။
စစခြင်းဒုက္ခတွေအဆင်မပြေတာတွေဗလပွရင်ဆိုင်နေရာကနေ အဆင်ပြေချင်တဲ့အခါ လွယ်လွယ်ကူကူလျောကနဲ့ပြေသွားတာကတော့ မြန်လွန်းလွယ်လွန်းတယ်လို့ခံစားရမိပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးထဲက စကားလုံးအသုံးအနှုန်း ရီစရာတလွဲ လေးကတော့
“စကူးဘီး ဆိုင်ကယ်လေးနင်းကာမြို့ထဲထွက်ခဲ့သည်”ဆိုတဲ့ စာသားလေးပါဘဲ။ဆိုင်ကယ်ဆိုမှတော့ မောင်းတယ်လို့ ပြောမှ အသုံးအနှုန်းမှန်မည်မဟုတ်ပါလား။
တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ် သူပြောတဲ့ စကူးဘီးဆိုင်ကယ်က စက်ဘီးဆိုင်ကယ်ဖြစ်နေလျှင်တော့ ကျွန်တော်မပြောတတ်ပါ။
ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့” အချို့ကိစ္စများက ကြားရသူစိတ်ကို နာကျင်စေမည့် အကြောင်းများဖြစ်လျှင် မပြောဘဲသိမ်းထားလိုက်သည်က ကိုယ်ချစ်ရသူများကို ပိုချစ်ရာရောက်မည်မဟုတ်ပါလား” ဆိုတဲ့ အတွေးလေးကတော့ လှပလွန်းပါတယ်။
ဘယ်လိုဘဲဆိုဆို အေးငြိမ့်မြိုင်ဆိုသော စာအုပ်လေးကို ဖတ်ရတာကျွန်တော်သဘောကျမိပါတယ်။
ဒီလိုသဘောကျတဲ့ အကြောင်းကို ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကိုပြောပြတော့ အေးငြိမ့်မြိုင်က ဒုတိယစာအုပ် သူ့ အရင်က တစ်အုပ်ရှိသေးတယ်ဆိုတာနဲ့ ထပ်ရှာရတော့ တာပေါ့။
အဲ့အခါမှာ “ လွမ်းတလွင့်လွင့်“ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးက ကျွန်တော့်ဆီရောက်လာပါတော့တယ်။အေးငြိမ့်မြိုင်က ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာလထဲမှာဖတ်ရပြီး “ လွမ်းတလွင့်လွင့်“ကတော့ ၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီလထဲမှာဖတ်ဖြစ်ပြီး တစ်လဘဲကွာသွားပါတယ်။
လွမ်းတလွင့်လွင့် ကိုဖတ်နေချိန်မှာခံစားရမှုက အေးငြိမ့်မြိုင်ကိုရေးတဲ့ မယ်စု နဲ့ မတူ တဲ့ မယ်စုနောက်တစ်ယောက်ရေးတာကိုဖတ်နေရသလိုပါဘဲ။
လွမ်းတလွင့်လွင့် ဇာတ်လမ်း အစမှာကတည်းက ခေတ်မီသောမိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ “မေစံပယ်ဖူးပွင့် “ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်အကြောင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်အဖွင့်မှာ ကုမ္မဏီတစ်ခုကနေ နောက်ထပ်ကုမ္မဏီတစ်ခုကိုပြောင်းဘို့ ကြိုးစားနေတဲ့အခန်းကနေ စဖွင့်ထားပါတယ်။
ဇာတ်အဖွင့်မှာပါတဲ့ တောင်ပေါမြို့လေးကို သွားတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖတ်ရတာကတော့ မြန်မာပြည်က အဖြစ်အပျက်နဲ့ မတူဘဲ နိုင်ငံခြားကမြို့လေးတစ်မြို့ မှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်လို့ ခံစားရပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ ခေတ်မီစွာ လက်မထပ်ဘဲအတူနေသော ချစ်ရတဲ့ “မောင်”ဆိုတဲ့လူငယ်လေးအကြောင်းပါလာတော့ လက်ရှိခေတ်ရဲ့မြိုပြနေလူငယ်များရဲ့ဘဝသရုပ်ကိုထင်ဟပ်မိစေပါတယ်။
သူနောက်ရောက်သွားတဲ့အလုပ်အသစ်မှာ ပါဝင်နေတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ “ဆူဇန် “ ၊ “ မျက်ဝန်းမလေး“ သူ့အထက်က အရာရှိဖြစ်ပြီး သူနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ရသူ “ မအေမီ“နဲ့ သူ့ နေရာမှာ အရင်ကအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးအလုပ်ထွက်သွားသူ “ မဝေမွန်“အစရှိတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလောက်အောင်ဖန်တီးထားခဲ့ပါတယ်။
လွမ်းတလွင့်လွင့် ရဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့ ဂမ္ဗီရဆန်တဲ့အတွက် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကို ပြောပြလိုက်ရင် ဖတ်မယ့်သူအတွက်အရသာပေါ့သွားနိုင်မယ်လို့ထင်မိတော့ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကိုတော့ ပြောမပြတော့ပါဘူး။
လွမ်းတလွင့်လွင့်ထဲမှာ ကျွန်တော်ကြွေသွားစေတဲ့ စာသားလေးတစ်ပိုဒ်ကတော့
“အင်းပါ ပထမဦးဆုံးအသဲကွဲဖူးတာမို့ တစ်ခါလောက်စိတ်လွတ်သွားမိတာပါ။နောက်ဆိုအဆင်ပြေအောင်နေပါမယ့်။အစ်မကြောင့် မင်းကိုစိတ်မပူပန်စေရပါဘူး။ဒီလိုလေးလာတွေ့ပေးတာနဲ့တင် ရူးမယ်ဆိုလဲ ရူးသွားရကျိုးနပ်ပါရဲ့ကွယ်”ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်လေးပါ။
စာအုပ်နှစ်အုပ်လုံးကို ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ မယ်စု ကို စာအရေးကောင်းသူတစ်ယောက်လို့အသိအမှတ်ပြုလိုက်မိပါတယ်။
နှစ်အုပ်လုံးမှာ ဖတ်သူကို အပါခေါ်ဆောင်သွားနိုင်လို့ပါ။
ဒုတိယတစ်အုပ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေကအတွေးအမြင်တွေက မြန်မာဆန်ပြီး ပထမတစ်အုပ်ရဲ့ အတွေးအမြင်တွေကတော့ ခေတ်မီလွန်းနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ မှတ်ချက်ကတော့ စာအုပ်နှစ်အုပ်မှာ မယ်စုနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရသလိုပါဘဲ။
စာရေးသူတိုင်းမှာဖြစ်တတ်တာကတော့ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ စကားလုံးဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အတွေးအခေါ်ကိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ထပ်ကာထပ်ကာ ရေးဖွဲ့မိလေ့ရှိပါတယ်။
မယ်စုကတော့ ဒီဘောင်ထဲကနေလုံးဝကင်းလွတ်ပြီး မတူအောင်ရေးဖွဲ့နိုင်သူဖြစ်လို့
ပြောရရင်တော့ မယ်စု နှစ်ယောက် ရေးတာကို ကျွန်တော်ဖတ်ရသလိုပါဘဲ။
အခုတတိယမြောက် စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ “နေခြည်နုနု ဗဟိုရ်ပြု၍ “ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကတော့ ဆိုင်တွေပေါ်ရောက်နေပါပြီ။
ရန်ကုန်ကနေ မှာထားပြီးလို့ မကြာခင်ကျွန်တော်ဖတ်ရတော့ မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်အသစ်မှာတော့ ပထမ မယ်စု နဲ့ တွေ့ရမလား ဒုတိယမယ်စုနဲ့ဘဲတွေ့ရမလား ဒါမှ မဟုတ် တတိယမြောက်မယ်စု အသစ်ကိုဘဲတွေ့ရမလားဆိုတာကို ကြိုတင်တွေးရင်းနဲ့ ဘဲစောင့်မျော်နေပါမယ်။
လူငယ်ထဲက စာအရေးကောင်းသူ တစ်ယောက်ပေါ်ထွက်လာတာကိုတော့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။